Ukuze kusetshenziswe kangcono ukuphathwa okuncane, kuthuthukiswe amakhono okusebenza, futhi kwandiswe imibono yokusebenza, ngoMashi 15, 2020, abasebenzi abasebenza phambili ekukhiqizeni bahlelwa ukuqhuba ukuqeqeshwa okulandela isonto lonke. Okuqukethwe okuyinhloko kwalolu cwaningo kufaka izingxenye ezimbili: ikhono lokusebenza kwabasebenzi bezintambo zokukhiqiza kanye namandla okuphatha esizeni. Ekuseni komhla ka-16, ngaphansi kobuholi bomphathi wezokukhiqiza, wenza ukuvakashelwa okuhlelekile nokufunda. Ntambama, wafunda umsebenzi ngokulandela i-shift, ehambelana namakhono okusebenza nokuphathwa kwesayithi. Kuwo wonke inqubo yokufunda, abasebenzi bemboni yethu bayalwa, bafunde ngokuzimisela, bacele izeluleko ngokuthobeka, futhi bakhombise umoya omuhle.
NgoMeyi 10, 2020, kwathathwa isinqumo sokwengeza imishini eminingana yokunyathelisa izingubo nezokunyathela. Ukuze uphrinte kangcono izinhlobo zephethini esezingeni eliphakeme, ingasetshenziswa futhi kuzinto ezahlukahlukene zendwangu. Kusuka ngaphakathi kuye ngaphandle, kunikeza umuntu okugqokile ukujabula okuphephile nokunethezeka kokugqoka. Ngokuya ngekhwalithi, ukufuna ukuphepha, ukungapheli, ukubuyiselwa okuphezulu, ukulawula okungcono kwekhwalithi, nokufuna njalo izinguquko nezinto ezintsha ekusebenzeni, izitayela nezinto zokwakha, ukudala imikhiqizo engcono.
Ukuze uthuthukise amakhono okusebenza nemibono yokusebenza, ngoSepthemba 14, 2020, vumela abasebenzi abafanele babambe iqhaza ezifundweni zolwazi oluyisisekelo, okuqukethwe okuyinhloko kokufunda kuyinqubo yokusebenza yangempela yokuqukethwe okuyisisekelo nemibono ehlobene yolwazi lwangaphakathi lwethiyori. Umncintiswano wolwazi phakathi kwabo wenza ulwazi lomkhakha wakhe wobuchwepheshe luqine futhi lujule kakhulu. Esimweni esikhululekile futhi esinolaka, abasebenzi bazoba nokuqonda okungcono, futhi ukusebenza kwangempela ntambama kuzobenza basebenze kahle futhi basebenze kahle.